त्यो भेटपछि मदन भण्डारी राजतन्त्रप्रति नरम भए | Jukson
पोखरा, असार १४
‘महाराज, हात नलम्काइबक्स्योस्, आँखा नचम्काइबक्स्योस् र आफ्ना शण्ड–मुसण्डहरूलाई नचलाइबक्स्योस्। यदि शण्ड–मुसण्डलाई चलाउने नै हो भने महाराजले श्रीपेच उतारेर सिंहासनमा राखेर, नेता भएर मैदानमा आउनुपर्यो, ताकि प्रतिद्वन्द्विता गर्न सकियोस्।’
राजा वीरेन्द्रले खनालसँग भने, ‘के कुरा गर्छौरु तिमीले यस्तो भाषण नगर भन्दैमा उनले मान्लान् र ?
‘मैले त्यस्तो के गरेँ ररु’, मदनले खनालसँग सोधे।
‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को निर्माण दलका प्रतिनिधिहरुले गरेको हो, त्यसमा तपाईंको पार्टीको पनि प्रतिनिधित्व थियो, संविधानमा श्री ५ ले चुनाव लड्ने व्यवस्था कतै छैन’, खनालले मदनसँग भने, ‘तर तपाईंले त राजालाई चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि आव्हान गर्नुभयो, संवैधानिक राजाले संसारको कुनै देशमा चुनाव लडेको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छरु’
‘अनेक बहानामा तपाईंहरु आफैं संविधानको बर्खिलाप हुने गरी भाषण गर्दै हिँड्ने गर्नुभएको छ’, खनालले भण्डारीलाई स्पष्टसँग भने, ‘तपाईंहरुले नै यस्तो गरेपछि राजा कसरी संविधानको सीमाभित्र बस्छन्रु’
‘अब तपाईंहरू प्रमुख प्रतिपक्षी बन्नुभयो, संसदीय व्यवस्थामा यो भनेको जिम्मेवार र सम्वेदनशील स्थान हो’, खनालले मदनलाई भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सरकार गलत बाटोमा गयो भने उसलाई ठीक बाटोमा लैजाने हो। यो भूमिका तपाईंहरु कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ ?’
‘म त संवैधानिक राजा हुँ। संवैधानिक राजा भएकाले मेरो भन्दा प्रधानमन्त्री (गिरिजाप्रसाद कोइराला) सँग तपाईंहरूकै बढी भेट हुन्छ’, वीरेन्द्रले भने, ‘मेरो अनुभवमा चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री अलिक जिद्दी स्वभावका छन्। तपाईंहरुको कुरा नमान्न सक्छन्। त्यस्तो भयो भने प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा तपाईंहरू के गर्नुहुन्छरु’
संसदमा अवरोध गर्ने कुरा वीरेन्द्रले रुचाएनन्। ‘त्यसो गर्दा तपाईंहरू अलोकप्रिय हुन सक्ने खतरा रहन्छ’, उनले सोधे, ‘सदन अवरोध गर्नेबाहेक अरू के के विकल्प छन्रु’
वीरेन्द्रले अर्को प्रश्न सोधे, ‘नेताहरूको भनार्इ र गरार्इमा फरक हुन्छ। जनता सामु जे कुरा भनिन्छ, ती कुरा पुरा गर्नुपर्छ। नत्र जनताको बीचमा अविश्वसनीय भइन्छ। तपाईंहरूले पनि जनतालाई आश्वासन मात्र दिने काम गर्नुहुने हो कि ? ’
खनाललाई लाग्छ, त्यो भेटपछि राजा वीरेन्द्र र मदन भण्डारीले एकले अर्कालाई राम्रोसँग चिन्ने मौका पाए। दुबैजना एकअर्कासँग प्रभावितपनि भए। वीरेन्द्रलाई भण्डारी सुझबुझ भएका नेता हुन् भन्ने पर्यो, मदनलाई पनि आफूले सोचेजस्तो वीरेन्द्र निरंकुश कठोर स्वभावका राजा होइन रहेछन् भन्ने लाग्यो।
साभार: नेपाल खबर